Ọnụ ego Haliç Metro Köprüsü, Ogologo na |dị | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulỌnụ ego Hali H Metro Bridge, Ogologo na Mpempe
10 / 11 / 2019 34 Istanbul, ụgbọ okporo ígwè, General, Maps, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Metro, Turkey
oke igwe metro akwa na ogologo
Nnukwu ụzọ ụgbọ oloko Haliç, nke nwere ọdịdị nke ụgbọ mmiri, bụ àkwà mmiri na-akwụsị akwụsị na ọdụ ụgbọ oloko ọla edo dị na Istanbul, nke na-enye ohere iji banye n'okporo ụzọ Şişhane Yenikapı Metro. Ihe owuwu nke 2 bidoro na Jenụwarị 2009, e mepere 15 na February 2014. Ọdọ mmiri, nke na-alaghachi nyocha nyocha mbụ nke 1960, na-enye ụzọ Şişhane Yenikapı metro line n'etiti Şişhane na Haliç. Enwere ike imeghe ma mechie mmiri mgbe ị na-agafe.
Ozi teknụzụ Haliç Metro Bridge
Aha ndị ọchịchị: Haliç Metro Crossing Bridge
Typedị: Ọdọ nkwusioru oblique agbatị
Ọnụ ọgụgụ ụkwụ: 2
Ogologo: 460 m (936 m)
Ozo: 12.6 mita;
Ightdị dị elu: Pylon: 65 mita
Dịkarịrị ohere: mita 180 (Ebe a na-akwụsị ya)
Bọchị mbido: 2 Jenụwarị 2009
Bọchị njedebe: 9 Jenụwarị 2014
Mmeghe: 15 February 2014
Ogologo Haliç Metro Bridge
Şişhane Yenikapı Metro, nke bụ kilomita 5.2 n'ogologo, jiri Haliç Metro Bridge gafere Golden Horn. Sishane Yenikapi Metro, nke na-ebelata ohere dị n'etiti Şişhane Yenikapı ruo nkeji 25, laghachiri n'ime ala mgbe Golden Bridge Metro Bridge gasịrị.
Ogologo ntanetị nke Golden Horn Metro Bridge bụ 936 mita na ịdị elu kachasị nke akwa ahụ bụ 17 mita karịa oke osimiri. Ewupụtara na ụkwụ 5 n'oké osimiri, ụkwụ 8 dị n'akụkụ Azapkapı na ụkwụ 6 n'akụkụ Unkapanı, Osimiri Golden Horn Metro na-emeghe naanị maka ndị metro na ndị njem.
A ga-ewepụta mmiri na-aga n'ihu iji gbochie mkpirisi okwute n'oké osimiri. Iji gosi dinamik aura di omimi üz na ikuku, a na-ejikwa àkwà mmiri ahụ, nke edoziri ihe ya dịka ikuku si aga, ọ ga-eji ụkwụ gafere.
Shadị Haliç Metro Bridge
Enwere cafeterias na ụlọ mposi n’elu ala etiti nke ogidi abụọ nke àkwà mmiri ahụ. E lere anya n’elu, a na-ese “ụgbọ mmiri ụlọ tasarlan dị ka cables enyo n’elu ebe ebe nkwụsị ahụ nwere ike ịrụ. Maka nhicha na nkwụsị, enwere ike ịsacha iko ahụ site na ijikọ eriri na-agbatị ya. Mgbe a na-arụ akwa ahụ na mpaghara sayensị na ebumnuche UNESCO, àkwà mmiri ahụ wee bụrụ otu n'ime ọrụ ugwu obodo Istanbul.
Ego Esteral Metro Bridge
Ọdọ mmiri bụ ogidi kachasị mkpa nke Taksim - Yenikapı Metro Line, nke nwere mkpo 5.2 n'ogologo ma na-efu nde 420 nde. Usoro a sitere na Taksim Square, soro Beyoğlu wee rute n'ọdụ ọdụ Şişhane, wee gbadaa Perşembe Bazaar. Site na ebe a n’elu ihu igwe na-acha ọla edo, Golden Horn, nke dị na ndịda ọdịda anyanwụ ụsọ oké osimiri Golden Horn gafere Küçük Pazar Street na-abanye ọzọ na nzuzo. Haliç Metro Crossing Bridge dị n'etiti “Unkapanı Side güneybatı na ndịda ọdịda anyanwụ na o andlu Beyoğlu Side kuzeydoğu na northwest direction.
Ọdọ mmiri dị n'agbata ụzọ abụọ dị n'akụkụ nke na-abụghị ibe ha, Unlọ Ọrụ Unkapanı na-arụ ọrụ abụọ. Mgbe ọ batasịrị n'ọwara ahụ, ahịrị ahụ tụgharịrị na ntụgharị nke Süleymaniye wee rute ọdụ ọdụ atọ nke içindeki Şehzadebaşı ola, nke dị nso na ogige Beyazıt na ụlọ obibi nke Mahadum Istanbul n'ime Ọdụ Ahụ Mere Ihe Akụkọ. Ahịrị nke si ebe a ruo n'ụsọ oké osimiri Marmara ruru ọdụ nke anọ nke “Yenikapı olan, nke jikọrọ ya na“ Bosphorus Cross Marmaray ”. Ekele maka ahịrị a jikọtara ya na Marmaray na ọdụ ụgbọ elu njikọ dị n'ọdụ a, Taksim - Yenikapi 8, Osmanbey - Kadikoy 28, Ọdụ ụgbọ elu - Maslak 56, Maslak - Kartal 71 nkeji.
Haliç Metro Bridge na-emepe ogo 90
* E wuru àkwà a na okpokoro 2,5 nwere dayameta nke 110 na omimi nke ihe dị ka mita 27 n'oké osimiri. Ogologo ogologo nke akụkụ ahụ bụ mita 360 ya na sistemụ eriri igwe abụọ nwere usoro nchara. Ihe dị ka otu puku mmadụ rụrụ ọrụ na ihe owuwu ahụ.
* N Rot Rot Bridge X wuru n’elu otu akụkụ 5, mkpokọta dayameta nke 2,5, mepere site na ịtụgharị centimita 12, tụgharịa ogo 90 n’otu pivot ụkwụ. Ogologo nke 120, 3 nwere ikike nke puku hydraulic elu 500.
* Beyoğlu na Unkapanı bịaruo ụzọ na-enye njikọ n'etiti metụ ọwara okporo ụzọ na akwa mmiri. A na-arụpụta ya na sistemụ mgbagha mgbagha ike na mita 171 n'akụkụ Unkapanı na mita 242 n'akụkụ Beyoğlu.
* N’agbata ogidi dị n’agbata mmiri na-agbagharị na mmiri Unkapanı, e nwere ebe a na-ebu okwute na ube na 10 na okpu isi maka nchebe nke ikpo okwu a.
* Takrụ Taksim - Yenikapı Metro Line, Anadolu Metro Partnership (Yüksel - Güriş -Reha- Başyazıcıoğlu), Haliç - Crosslọ Ọgba mmiri Ave - Gülermak Joint Venture (AGJV), Electromeranic na ezi ọrụ na-ewu Alarko - Rotem - Hyundai Consortium rụrụ.
Oge njem nke 10 nke Golden Horn Metro Crossing Bridge
Architect Hakan Kıran, 14 June 2004, ihe osise mbụ, wepụrụ Unkapanı Bridge dị adị, ọzọkwa n'ụdị ụgbọ ala, ụzọ ụgbọ oloko na akwa ije ụkwụ. Ebumnuche ahụ bụ ijikọta anyụike niile na-agafe n'okporo ụzọ kama ị ga - eme ka ndị njem, ụgbọ na ụzọ gafere. N'otu oge ahụ, Ugwu Unkapan was bụ iwepụ mmetụta ọjọọ na Halihip Shipyard, ụlọ alakụba Sokullu nke Sinan na ntọala Haliç. Agbanyeghị, echiche a bụ na a ga-akagbu puku oghere 1985 mita a rụrụ n'okporo ụzọ nke kpebisiri ike na 100 na ekwesịrị ibuga ya na axçis bụ nke bụ ntanetị nke Unkapanı Bridge. Ekwuputara echiche a site na okirikiri ndị na-emegide àkwà Golden Horn. Site na mmeghachi omume ọha na eze, enyere ụlọ Haliç Metro Crossing Bridge na ụzọ ekwenyero na 1985. Egosiputara Kọmịshọ nke ochie ahụ nke ochie ahụrụ, ọrụ ahụ gbahapụrụ ma mepụta atụmatụ ọhụrụ na ntọala nke taa, yana otu ụkpụrụ ahụ dị ka nke mbụ.
Nke mbu, emere nyocha nke ikuku, ala na ihe omuma ala nke The Golden Horn, uzo ihe omimi nke ala mmiri na ihe omuma ya na uzo ihe ncheta. Nchọpụta a gara n'ihu n'ọrụ ọrụ ahụ dum. Turkey si oru ngo na-arụ ọrụ na ndị na-eduga ndị ọkà mmụta sayensị na ụwa.
Işhane Yenikapı Metro Stations
Ogologo usoro Bursa Metro ga-abawanye na 114,4 Km!
Ego na usoro ụgbọ okporo ígwè Bursa…
Ọnụahịa Line Train OMU: 130 Million TL
Ego nke Malatya-Elazığ Express 30 Million TL
Ewu nke Bursa-Yenişehir High Speed ​​Line…
Stanbul İzmir Motorway Toll Route na…
Unkapanı, Galata na Haliç Metro Bridges Tonight Gece